Farmaajo oo Aan Ka Hadlin Xasuuq Ay Ciidamada Itoobiya iyo Kenya Ka Geysteen Koonfurta Soomaaliya.
Monday May 15, 2017 - 12:32:47 in Wararka by Super Admin
Melleteriga dowladaha Kenya iyo Mareykanka ayaa xasuuq daran ka geystay deegaano katirsan gobollo dhaca Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka Kenya ay duqeeyeen tuulooyin kulaala xadbeenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
Diyaarado dagaal ayaa la sheegay in dhowr gantaal ay laheleen wara biyoodyo xilligaasi ay ku sugnaayeen dad xoola dhaqata ah waxaana jira khasaara dhimasho iyo dhaawac ah.
Sidoo kale ciidamada Itoobiya ayaa dad shacab ah ku laayay deegaanno katirsan gobolka Hiiraan, dhammaan dhacdooyinkan waxay imaanayaa xilli madaxweynaha Dowladda Federaalka Max’med Cabdullaahi Farmaajo uu dhowaan socdaallo ku tagay magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi.
Farmaajo illaa iyo hadda kama hadlin dadka shacabka ah ee shisheeyuhu xasuuqa ku hayo, dad badan ayaa isweydiiyay Farmaajo raalli miyuu ka yahay xasuuqan ay geysanayaan ciidamada Itoobiya iyo Kenya mise isaga ayaaba amray.
Hoggaamiyaha cusub ee DF-ka ayaa markii uu xilka qabtay iska dhigayay wadani ka dhiidhin doona dhibaatada lagu haayo shacabka Soomaaliyeed taasi bedelkeedna wuxuu halmbayeeyay duullaanka ciidamada shisheeya ay ku joogaan dalka wuxuuna AMISOM ku tilmaamay kuwo walaalo ah!
Socdaalkii Farmaajo ee magaalada Addis Ababa ayaa la rumeysanyahay in uu wax badan ka bedelay mowqifkiisi ku wajahnaa dowladda Itoobiya, dad badan ayaa rumeysan in Farmaajo uu cagta saaray dhabihii Col.C/llaahi Yuusuf, Gurguurte iyo Shariif Sheekh Axmed oo dhammaantood Hayin raran u ahaa Itoobiya iyo Kenya.